AH: လီကွမ်ယူး (သို့) စင်ကာပူ၏ ပဲ့ကိုင်ရှင်
“စင်ကာပူမှာတုန်းကတော့ လူဖြူတွေအကြောင်း သိပ်ပြီးတော့ အတွင်းကျကျ မသိခဲ့ပါဘူး။ လူဖြူဆိုရင်ပဲ အဆင့်မြင့်တဲ့ မိုးကျရွှေကိုယ်လို့ မှတ်ထားတာ။ ကျနော် ဒီရောက်လာတော့ ဒီလို မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကိုယ်ဟာ သူလို ကိုယ်လိုပဲဆိုတာ သူတို့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ တွေ့လာရတာပဲ။ ဆိုင်သွားလိုက်ရင် သူတို့လည်း ကျနော့်ကို ကျိုးနွံတဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ပေးရတာပဲလေ။ ဒီတော့ ဒီလိုလူတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ခံဘ၀ရောက်ဖို့ ဘာမှ အကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော် မြင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် စင်ကာပူပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်… နောက်ပြီး ဒီစနစ်ကြီးကို အပြီးသတ်မယ်။”
“ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားတာတွေကို ဘယ်တော့မှ အရမ်းကြီး စဉ်းစားတာတို့ အဲ့ဒီရဲ့ သက်ရောက်မှု့တို့ကို ကြည့်မနေပါဘူး။ အဲဒီအရာတွေနောက်လိုက်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ပျော့ညံတဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ပဲ။ ခင်ဗျားဟာ ခင်ဗျားကို ပေးတဲ့ မဲအရေအတွက် နည်းသွားလား၊ များလာလားကိုပဲ ထိုင်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး။ ခင်ဗျားဟာ လေနောက်ကို လိုက်ဖမ်းနေတာပဲ ဖြစ်နေမှာ။ ခင်ဗျားဟာ လေယူရာကို တိမ်းနေတော့မှာ။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတာ ဒီအတွက်မဟုတ်ဘူး။
ချစ်ခြင်းနဲ့ ကြောက်ရွံခြင်း ကြားထဲမှာ ကျွန်တော်ကတော့ အီတလီ နိုင်ငံရေးသမား Machiavelli ပြောခဲ့တာကို အမြဲယုံတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်သူမှ မကြောက်ကျတော့ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်ဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေပြီ
ခင်ဗျား ကြိုက်တဲ့လူတွေကို ဆန္ဒကောက်ကြည့်ပါလား။ သူတို့ဘာလိုချင်လည်း သိလား? ခင်ဗျား စာရွက်ပေါ်က ခင်ဗျား လိုချင်သလို တည်းဖြတ်၊ ရေးချင်တာရေးထားတဲ့ ဆန္ဒတွေကို သူတို့ကို ဖြည့်ခိုင်းမှာလား? သူတို့လိုချင်တာက အိမ်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့၊ အလုပ်အကိုင် နဲ့ ပညာရေးပဲ”
သူ့ရဲ့ iron-fisted (တစ်ပါတီ အာဏာ) အစိုးရ ပုံစံနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး
“တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို အစားထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ သံလက်သီးစွပ်ကို သူ့လက်ပေါ်မှာ စွပ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကို နာအောင်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုပြီး ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျားဟာ တရုတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မှ အုပ်ချုပ်လို့ မရဘူး။
ခင်ဗျား ပြသနာတွေချည်းရှာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က နိုင်ငံရေးအရ ခင်ဗျားကို ချေမှုန်းဖို့ပဲ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့် အိပ်ထဲမှာ ပုဆိန်တစ်လက်ရှိတယ်၊ အရမ်းအသွားထက်တဲ့ ပုဆိန်။ ခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို စိမ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ပုဆိန်ကို သုံးမှာပဲ။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် တစ်ဖက်ပိတ် လမ်းထဲမှာ တွေ့မှာပဲ”
“သူတို့ဟာ ကွန်မြူနစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆွယ်တရားဟောတဲ့လူ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ ဖမ်းပြီး ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုရင် အယူခံမရှိ ဖမ်းရမှာပဲ။ ဒီလိုမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံ ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်”
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို အိမ်ထောင်ချထားပေးရေး လမ်းစဉ်နှင့် ပါတ်သတ်ပြီး
“ခင်ဗျားရဲ့ မျိုးဆက်အတွက် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မထည့်သွင်းပဲ သူတို့ စာအုပ်စင်နားမှာပဲထားမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် ကျွန်တော့်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ ငနုံတွေနဲ့ချည်း အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆို ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ? မျိုးဆက်သစ်တွေထဲမှာ လူနုံတွေကို ထောက်ပံပေးဖို့ လူတော်နည်းနည်းပဲ ကျန်တော့မှာ။ အဲ့ဒါက ပြသနာပဲ”
၀န်ကြီးနှင့် အထက်တန်း နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက်၏ မြင့်မားသော လစာနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး
“ခင်ဗျားသိလား ဒီလိုလစာမျိုးမှ မပေးဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ရဲ့ အစိုးရဟာ အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့ အစိုးရဖြစ်ဖို့ ဆေးတစ်ခွက်ပေးလိုက်တာနဲ့တူတူပဲ။ ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားဟာ အရည်အချင်းမပြည့်ဝတဲ့ အစိုးရကြီး ရလာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် စင်ကာပူနိုင်ငံကြီး တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? အာကလန် ပါကလန် လူတွေနဲ့ စင်ကာပူကြီးတိုးတက်ဖို့ ဘယ်လိုလက်တွဲလုပ်ဆောင်မလဲ? ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားရဲ့ နိုင်ငံသား တန်ဖိုးဟာ အရမ်းအန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေရောက်သွားပြီ။ ခင်ဗျားရဲ့ လုံခြုံရေးမှာ အန္တရာယ်ရှိလာပြီ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသား အမျိုးသမီးတွေဟာ သူများနိုင်ငံတွေသွားပြီး အိမ်ဖော်လုပ်ရလိမ့်မယ်၊ နိုင်ငံခြားသွားပြီး အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်”
ဘာသာရေး ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု့နှင့် ပါတ်သတ်ပြီး
“ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် ဘုရားမဲ့ဝါဒလို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကို မငြင်းသလို လက်လည်း မခံပါဘူး။ ဒီအတွက် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည့်သူတွေကို ပျက်ရယ် မပြုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည့်ဖို့ မလိုအပ်သလို၊ ယုံကြည်ဖို့လည်း မလိုအပ်ပါဘူး”
သူနှင့် ၆၃နှစ်ကြာ လက်တွဲဖော် ဇနီးသည် ၂၀၁၀မှာ ဆုံးသော အခါ
“သူ မရှိတော့ ကျွန်တော်ဟာ အရင်နဲ့ မတူတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်၊ ဘ၀တစ်ခုကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ သူမရဲ့ ၈၉ နှစ်တာ ဘ၀တစ်ခုလုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသွားခဲ့ရတာကိုပဲ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စိတ်ဖြေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးခွဲခွာရတဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် နှလုံးသားမှာ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့နဲ့ ၀မ်းနည်းမှု့တွေ ခံစားရပါတယ်။”
“ဒါဟာ လူတိုင်းအတွက် အဆုံးသတ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မြန်နဲ့ သက်သက်သာသာ ပြီးဆုံးချင်တာပါပဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာဝန်ကိုမှ ကိုယ်မသယ်နိုင်၊ အိပ်ယာထဲမှာ အသိကပ်တစ်ဝက်၊ မကပ်တစ်ဝက်၊ နှာခေါင်းပိုက်တန်းလန်းနဲ့ အဖြစ်ကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်အိပ်ယာထဲ လဲနေရင်တောင်၊ ကျွန်တော့ကို အသုဘ ကျင်းထဲ ခင်ဗျားတို့ ချဖို့ လုပ်နေရင်တောင် တစ်ကယ်လို့ တစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ရင်တော့ ကျွန်တော် ပြန်ထလာမှာပဲ။”
Source ; (Link)
Posted by AH at 3/23/2015 05:08:00 PM